एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई भोट हाल्नु साँढेको टाङमुनी बाल्टी थाप्नु जस्तै हो : लिङ्देन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पुराना नेता र पार्टीहरूबाट अव देशको विकास सम्भव नभएकोले विकल्प रोज्न आग्रह गरे । अहिले राप्रपा नयाँ विकल्प बनेर आएको भन्दै भोट हालेर चुनाव जिताउन आग्रह गरेका हुन् ।
‘कांग्रेसलाई अब कति पटक भोट दिएर देश बन्छ होला ? एमाले, माओवादीलाई कति पटक मौका दिए बन्छ होला ? ३० वर्षदेखि हेर्‍यौं । मैले आलोचना गर्न भनेको होइन,’ उनले भने, ‘कुनै कांग्रेसको साथीले भन्न सक्छ ? शेरबहादुर देउवालाई कति चोटि थपिदियो भने देश बन्छ होला ? केपी ओली, प्रचण्डहरूलाई कति पटक दियो भने देश बन्न सक्छ होला ? एमाले, माओवादीका साथीले भन्न सक्छ ?’
उनले पूरानै पार्टीलाई भोट दिनु भनेको साँढेको टाङमुनी बाल्टी थापेजस्तै हुने तर्क गरे । ‘फेरि मलाई भन्न मन लाग्छ, यिनै नेता र पार्टीलाई भोट दिनु भनेको साँढेको टाङमुनी बाल्टी थाप्नु जस्तै हो । साँढेको टाङमुनी बाल्टी थापेर दूध आउँछ ? आउँदैन,’ उनले भने, ‘त्यै भएर अहिले मुख्य विकल्प भनेको राप्रपा हो । खुलेर आउन मन हुनेहरूले खुलेरै सहयोग गर्नुस्, खुल्न नसक्नेले आफ्नै पार्टीमा बसेर हलोमा भोट हाल्नुस् ।’
पोखरामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै लिङ्देनले एमालेलाई जनताले ८ वटै सरकारको नेतृत्व गर्ने जनमत दिए पनि त्यसलाई थाम्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनीहरूलाई भोट दिन नहुने बताए । ‘नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई ८ वटै सरकारको नेतृत्व गर्न दिएको होइन ? यो कम्युनिस्टको सरकार कांग्रेसले ढालेको हो ? राप्रपाले ढालेको हो ? जनताले ढालेको हो ?,’ अघि भन्छन्, ‘त्यो मतलाई ५ वर्ष थामेर खान सक्दैनन् । एमाले भन्ने पार्टीलाई कति सिट दियो भने सरकार थामेर खान सक्लान् ? त्यसकारण कसैले पनि गल्ती गर्न हुँदैन । भुल गर्ने छुट छैन ।’
आफूले कुरा मात्रै नभई कामै गरेर देखाइदिने लिङ्देनको दाबी छ । ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीका बाठा साथीहरूले भन्नुहोला हामीले नसकेको काम राजेन्द्रले गर्न सक्छ ? हामी कर बढाउने होइन, हामीले चुनाव जितेको स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत कर कटौती गरेर देखाइदिन्छौं,’ भन्छन्, ‘त्यसैले के कांग्रेस, के एमाले, के माओवादी, के जसपा एक पटक राप्रपालाई भोट दिनुस् । आफ्नो पार्टीको नेता आउँदा धुरीको झण्डा देखाइदिनुस् । भोट चाहिँ चुपचाप हलोमा हान्नुस् है ।’